Mabasa Evaapostora 12:1-25
Jakobho anourayiwa; Petro anoiswa mujeri (1-5)
Petro anobudiswa mujeri nechishamiso (6-19)
Herodhi anorohwa nengirozi (20-25)
12 Mumazuva iwayo, mambo Herodhi akatanga kubata zvakaipa vamwe vanhu vemuungano.+ 2 Akauraya Jakobho mukoma waJohani+ nebakatwa.+ 3 Paakaona kuti vaJudha vakafara nazvo, akabva asungawo Petro. (Aya akanga ari mazuva eChingwa Chisina Mbiriso.)+ 4 Akamubata, akamuisa mujeri,+ achichengetwa nemapoka mana evarwi aiita zvekuchinjana, boka rimwe nerimwe riine varwi vana, achida kuzomubudisa* pamberi pevanhu Paseka yapera. 5 Saka Petro akanga akavharirwa mujeri, asi ungano yaimunyengeterera zvikuru kuna Mwari.+ 6 Usiku hwainzi naHerodhi achafuma achimubudisa, Petro akanga akarara akasungwa necheni mbiri ari pakati pevarwi vaviri, uye pasuo pakanga paine varindi vachichengeta jeri. 7 Ngirozi yaJehovha* yakabva yamira imomo,+ chiedza chikavheneka mujeri. Yakabva yarova Petro parutivi, ikamumutsa ichiti: “Kurumidza kumuka!” Uye cheni dzakadonha pamaoko ake.+ 8 Ngirozi yakati kwaari: “Pfeka zvipfeko zvako neshangu dzako.” Iye akaita izvozvo. Yakazoti kwaari: “Chipfeka nguo yako yekunze, unditevere.” 9 Akabuda, akaramba achiitevera, asi haana kuziva kuti zvaiitwa nengirozi zvakanga zvichinyatsoitika. Iye aitofunga kuti ari kuona chiratidzo. 10 Vakapfuura varindi vekutanga nevechipiri, ndokusvika pagedhi resimbi raipinda muguta, rikabva ravhurika rega kuti vabude. Pavakabuda, vakadzika nemumwe mugwagwa, uye ngirozi yacho yakabva yamusiya. 11 Petro akabva apengenuka, akati: “Iye zvino ndava kunyatsoziva kuti Jehovha* atuma ngirozi yake, akandinunura mumaoko aHerodhi uye pazvinhu zvese zvanga zvichitarisirwa nevaJudha.”+ 12 Paakaziva izvi, akabva aenda kumba kwaMariya amai vaJohani ainzi Mako,+ kwainge kwakaungana vanhu vakawanda vachinyengetera. 13 Paakagogodza pagedhi, mushandi wechisikana ainzi Rodha akauya kuzoona kuti ndiani. 14 Paakanzwa kuti inzwi racho nderaPetro, akafara zvekutadza kuvhura gedhi, akamhanya mukati kunotaura kuti Petro akanga akamira pagedhi. 15 Ivo vakati kwaari: “Wava kupenga.” Asi iye akaramba achiti ndiye. Vakatanga kuti: “Ingirozi yake.” 16 Asi Petro akaramba aripo, achigogodza. Pavakavhura suo, vakamuona vakashamiswa. 17 Asi akavanyararidza achishandisa ruoko, akavaudza zvese zvakanga zvaitwa naJehovha* kuti abude mujeri, uye akati: “Muudze Jakobho+ nedzimwe hama zvinhu izvi.” Akabva abuda, akaenda kune imwe nzvimbo. 18 Kuzoti kwaedza, varwi vakatanga kuita mheremhere pamusoro pekuti chii chaitika kuna Petro. 19 Herodhi akamutsvaga nemaziso matsvuku, akamushaya, ndokubvunzurudza varindi, akarayira kuti vaendeswe kunorangwa;+ uye Herodhi akabva kuJudhiya akadzika kuKesariya, akagara ikoko kwekanguva. 20 Akanga akatsamwira* vanhu vekuTire neSidhoni. Saka vakauya kwaari vakabatana, uye vakanyengetedza Brasto, uyo aiva mukuru weimba yamambo, kuti avabatsire kuva nerugare namambo, nekuti nyika yavo yaipiwa zvekudya nenyika yamambo. 21 Rimwe zuva rakanga rasarudzwa, Herodhi akapfeka zvipfeko zveumambo, ndokugara pachigaro chekutonga, akatanga kutaura nevanhu vese. 22 Vanhu vakanga vakaungana vakabva vatanga kushevedzera vachiti: “Inzwi ramwari, kwete remunhu!” 23 Pakarepo ngirozi yaJehovha* yakamurova, nekuti haana kukudza Mwari, uye akadyiwa nehonye, akafa. 24 Asi shoko raJehovha* rakaramba richikura uye richipararira.+ 25 Bhanabhasi+ naSauro pavakapedza kuita basa rekuyamura muJerusarema,+ vakadzokera vakanotora Johani,+ uyo anonziwo Mako.
^ Kana kuti “achida kuzomutonga.”
^ Kana kuti “achida kurwisa.”